Ziva Matambudziko Ekutarisa
musha Products DataNumen Outlook Repair Ziva Matambudziko Ekutarisa
Kana iwe ukasangana nematambudziko akasiyana siyana kana uchishandisa yako Outlook, unogona kuongorora iro dambudziko uye uwane mhinduro yacho.
Chekutanga pane zvese, zvinokwanisika kuti zvikonzero zvakasiyana zvinokonzeresa dambudziko kana chiratidzo, saka unofanirwa kuona chikonzero chaicho usati wawana mhinduro yacho. Zvikonzero zvakajairika ndezvi:
Zvimwe zvakakanganisika Outlook Wedzera-Ins zvinokonzeresa dambudziko.
Yako Outlook PST faira yakakuvadzwa kana yakaora.
Yako Outlook chimiro chakaora.
Yako Outlook yekumisikidza kana kumisikidzwa haina kunaka.
Kune kana dambudziko iri richikonzerwa nechikonzero 1, unogona kutanga kudzima ese maAdd-Ins muAptlook, seinotevera:
Dzvanya "Faira"> "Sarudzo"
Mune Outlook Sarudzo dialog, kubva kuruboshwe sidebar, tinya "Wedzera-Ins".
Muhwindo guru, chengetera "Go" bhatani muzasi kwehwindo.
Mu COM Wedzera-Ins dialog, sarudza ese maAdd-Ins, wobva wadzvanya pakanzi "OK".
Vhara Outlook uyezve restart it.
Izvi zvinodzima ese maAdd-Ins mune yako Outlook. Kana dambudziko rakanyangarika mushure me restarting Outlook, ipapo dambudziko rinokonzerwa nechikonzero 1. Zvikasadaro, unofanirwa kuenderera neinotevera maitiro.
Tsvaga yako PST faira nekutevera mirairo pa ino.
Kopa yako PST faira kune imwe komputa ine Outlook yakaiswa.
Start Outlook mukombuta nyowani, wobva washandisa "Faira" -> "Vhura" -> "Outlook Dhata Faira", kuvhura iyo PST faira.
Kana iyo PST faira isingakwanise kuvhurwa, kana paine mamwe mameseji ekukanganisa paunenge uchivhura iyo faira, ipapo yako PST faira yakaora saka tinogona kusimbisa dambudziko rako rinokonzerwa nechikonzero chechipiri, zvikasadaro, kana iyo PST faira inogona kuvhurwa pasina matambudziko, ipapo yako PST faira inofanirwa kuve ine hutano uye chikonzero chiri 2 kana 3.
Nechikonzero 2, unogona kutarisa ino kugadzirisa dambudziko.
Nechikonzero 3 ne4, iwe unofanirwa kuenderera nenzira yekuongorora, seinotevera:
Enda kuStart Menyu> Dhijitari Panel> Tsamba.
Dzvanya "Ratidza Maprofiles"
Dzvanya "wedzera”Kuwedzera nhoroondo nyowani.
Muchikamu chezasi cheiyo dialog, seta iyo nyowani nyowani se "Kana starting Microsoft Office Outlook, shandisa chimiro ichi ”
Sarudza iyo nyowani yakagadzirwa, wobva wadzvanya “Properties"
Wedzera iyo PST faira kune iyo nyowani nhoroondo.
Restart yako Outlook. Kana dambudziko rako reAptlook rikanyangarika, saka chikonzero chiri 3 uye iwe wagadzirisa dambudziko rako. Zvikasadaro, chikonzero chiri 4.
Nechikonzero 4, ipapo kuiswa kwako kweAptlook hakuna kunaka uye ungatofanira kudzoreredza Outlook kana hofisi hofisi yese. Kana kana iwe uine backup ye yako system, ipapo unogona kudzoreredza yako system kune backup point kana iwe uchigona kushandisa Outlook pasina matambudziko.